Sawirro: R/W Kheyre oo Ololo cusub kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: R/W Kheyre oo Ololo cusub kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho
Sawirro: R/W Kheyre oo Ololo cusub kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo lagu jiro howlihii ugu dambeeyey ee loogu gargaarayo dadka ay abaaraha saameysay ayuu Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre Magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay Ololo cusub oo dadkaas loogu tabarucayo.
Ra’isulwasaaraha ayaa ololahaas ugu magac dara Ololaha Gurmad Qaran waxaana lagu soo bandhigay xaflad maanta ka dhacday Magaalada Muqdisho oo ay kasoo qeybgaleyn ganactada Soomaaliyeed iyo Ra’isulwasaaraha.
Kheyre ayaa sheegay inay shacabka Soomaaliyeed maanta ku jiraan xaalad xalis ah oo ay lagama maarmaan tahay in loo sameeyo gurmad weyn wuxuuna ganacsatada ka codsaday inay arrintaan ku darsadaan inta ay awoodaan si Alle ganacsigooda ugu barakeeyo.
Ra’isulwasaaraha ayaa ganacsatada ugu sheegay inaysan jirin maalin ay shacabka Soomaaloya uga baahi badan yihiin inay caawiyaan sidaas darteed laga doonayo inay si deg deg ah u hoggaamiyaan gurmadkaan.
Xafladda ayaa waxaa goob jooga ka ahaa guddiga gurmadka abaaraha iyo xubno ka tirsan wasiirada xilka sii haayo waxaana kulankaas kusoo dhamaaday guul iyadoo ay ganacsatada ballan qaadeyn inay gacan weyn ka geysan doonaan.
Somaaliya ayaa waxaa ka jirto arrin lagu sheegay inay ka mid tahay abaarihii ugu darnaa ee Soomaaliya soo mara waxaana dhacday inay hal maalin gaajo, cuduro iyo haraad ay u geeriyoodaan 70 qof dhulka uu ka arrimiyo maamulka Koonfur Galbeed.